MUUQAAL-Wasiirro ka tirsan Xukuumadda oo baaq nabadeed u diray beello ku dagaallamay Baladweyne – Radio Muqdisho
MUUQAAL-Wasiirro ka tirsan Xukuumadda oo baaq nabadeed u diray beello ku dagaallamay Baladweyne
Wasiirradan baaqa nabadeed jeedinayey ayaa kala ahaa wasiirka Amniga Gudaha Mudane C/risaaq Cumar Maxamed, Wasiirka Macdanta iyo Badtoorka, Mudane Maxamed Muqtaar, wasiirka Shaqada iyo Shaqaalaha Mudane Cabdiweli Sheekh Muudey iyo wasiir ku xigeenka Wasaaradda Caafmaadka, Mudane Cismaan Maxamed Daallo, iyagoo si wadajir ah cod dheer ugu baaqay beello walaalo ah oo uu dagaal ku dhexmaray magaalada baladweyne ee gobolka Hiiraan.
Wasiirka Amniga Gudaha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, mudane C/risaaq Cumar Maxamed, ayaa yiri “ waa muhiim in dagaalka la joojiyaa in dadka masaakiinta ah la badbaadiyo, waxaana uga mahadcelinayaa dhammaan hoggaamiyeyaasha dhaqanka ee gobolka Hiiraan dadaalkooda ku aaddan sidii dagaallada u kala dhexgaleen”.
Sidoo kale Wasiirka Macdanta Badroolka Mudane Maxamed Muqtaar iyo wasiirka Shaqada iyo Shaqaalaha, mudane Cabdiweli Sheekh Muudeey, ayaa iyagana codkooda ku biiriyey in dagaallada baladweyne ka dhacay si deg deg ah loo joojiyo oo dadka waalaha ah waxyaabaha ay kala tabanayaanna lagu dhammeeyo madasha wada hadalka, si loo xaliyo.
Ugu dambeyntii wasiir ku xigeenka Wasaaradda Caafmaadka Soomaaliya, Mudane Cismaan Maxamed Daallo, ayaa ka codsaday bulshada reer Hiiraan iyo odayaasha Dahqanka in ay laba-laabaan sidii ay u nabadeyn lahaayeen deegaanka, isla markaana wasiirrada ka jeeda gobolkana ay diyaar u yihiin in ay kaalintooda ka qaataan sidii nabad loo gaari lahaana ay ku dadaalayaa.
Magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan, ayaa sabtigii la soo dhaafay waxaa ka dhacay dagaal u dhaxeeya beelo walaala ah oo halkaasi wada degga inkastoo markii dambe ay odayaasha Dhaqanka iyo maamulka gobolka oo iskaashanaya ay ku guuleysteen in dagaalkaasi la joojiyo, waxaana isa soo taraya baaqyada nabadeed ee loo jeedinayo beelaha dagaallamay.
Beesha Caalamka oo soo dhaweysay asixinta golaha Wasiirada ee Soomaaliya